हामीले अलिअलि लुगा लगाएका थियौं, ओली सरकार निर्बस्त्र देखियो : डा. रिजाल — Himali Sanchar
हामीले अलिअलि लुगा लगाएका थियौं, ओली सरकार निर्बस्त्र देखियो : डा. रिजाल
काठमाडौं । वर्तमान सरकार अधिनायकवादउन्मुख भएको तर्क गर्ने कांग्रेस नेतामध्ये डा. मिनेन्द्र रिजाल अग्रपंक्तिमा पर्छन् । उनी नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कहिले रब्सपियरसँग तुलना गर्छन् त कहिले रोबर्ट मुगाबे नबन्न खबरदारी गर्छन् ।
संसदीय राजनीतिमा खरो वक्ताको पहिचान बनाउन थालेका कांग्रेस नेता रिजालका अनुसार अहिले सत्ताको दबाव सबैतिर महसुस हुन थालेको छ । कार्यकाल सकिएर जाँदै गरेकी अमेरिकी राजदूतले ‘नेपालमा डेमोक्रेटिक डिस्कोर्षको स्पेस कम हुँदै गएको छ’ भन्नुले अन्तराष्ट्रिय जगतले पनि यो कुराको महसुस गरेको रिजालको दाबी छ ।
प्रस्तुत छ, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका डा. रिजालसँग अनालाइनखबरका लागि राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः
पुग्नुपर्छ । यसका लागि मेरो प्रस्ताव किन अस्वीकृत भयो भनेर प्रधानमन्त्रीमा खोज्नुपर्‍यो । एक ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव राखेर बन्द कोठामा फेरि अस्वीकार गर्न किन निर्देशन दिनुपर्‍यो ? के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो जवाफ दिनुपर्‍यो । तर, प्रधानमन्त्री एउटा लडाइँ जितेको योद्धाका रुपमा देखिनुभएको छ । यो हामीले जे आशंका गरेका हौं, त्यसका लागि एउटा प्रमाण भएको छ ।